MJS – Talen’ny Spaoro federaly (DSF): kandidà telo no tena misongadina | NewsMada
MJS – Talen’ny Spaoro federaly (DSF): kandidà telo no tena misongadina
Par Taratra sur 21/05/2019
Tsy nisy nipetraka teo amin’ny toeran’ny Talen’ny Spaoro Federaly, noho ny fanendrena an-dRakotozafy Rosa (nitantana izany departemanta izany teo aloha), ho Tale Jeneraly ny Spaoro (DGS), roa volana izay. Araka ny loharanom-baovao, antontan-taratasy maro no voaray teny anivon’ny Ministera ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Raha ny fanadihadiana natao anefa, ny telo amin’izy ireo ihany aloha no tena fantatra, isan’izany i Finaritra, am-perinasa eo anivon’ny Mjs ary lehibena sampan-draharaha eo anivon’ity Minisitera ity ihany koa. Saika hita matetika hatrany izy, mandritra ny hetsika ara-panatanjahantena, indrindra ny fifidianana eny anivon’ny federasiona, toy ny teo anivon’ny federasiona malagasy taranja volley-ball, natao tany Toliara. Mbola tazana ihany koa ny tenany, tamin’ny fifidianana Taekwondo ary ny taranja Tolona, natao tany Mahajanga. Azo lazaina ho efa nandray an-tanana ny asa fanaon’ny DSF i Finaritra raha ireo efa vitany ireo no jerena.
Andrianantenaimanantena Davidson Mickaël, kandidà ho amin’ity toerana ity ihany koa. Tale Teknika Nasionalin’ny taranja Savate ny tenany izay manana ny fahaizana sy afaka mandray ity toerana ity. Isan’ireo mpitarika ny tolona teny anivon’ny sendikalin’ny mpampianatra fanatanjahantena an-tsekoly Andriamatoa Davidson.
Farany, ramatoa Andriamanjatoarimanana Tojohanitra, hifaninana amin’ny toeran’ny DSF ihany koa. Ankoatra ny maha olympien ny tenany, filohan’ny ligin’Analamanga ny taranja Lomano i Tojohanitra amin’izao fotoana izao. Araka ny nambaran-dRamatoa Rosa, tamin’izy voatendry ho Tale Jeneraly, faniriana raha toa ka vehivavy ihany no hipetraka eo amin’ny toeran’ny DSF. Tsara toerana, araka izany, i Tojohanitra.
Marihina, ny Minisitra miaraka amin’ny Sekretra jenaraly sy ny DGS no manao ny fanadihadiana hahafahana manendry izay ho Talen’ny Spaoro federaly. Alefa eny anivon’ny governemanta ny anaran’izay lany avy eo, hodinihina amin’ny filankevitry ny Minisitra.